सरकारले ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनमा जान्छौं– हेमन्तप्रकाश ओली
नेपाल लाइभ शुक्रबार, साउन १, २०७८, २२:४७
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’नेतृत्वको नेकपाले 'ध्वसांत्मक गतिविधि' गरेको भन्दै २८ फागुन २०७५ मा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेलगतै चैत ९ गते नेकपा सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’सहित ९ जना नेता-कार्यकर्ता काभ्रेबाट पक्राउ परे। ओली जेलमै रहेको अवस्थामा सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच गत फागुन २१ गते ३ बुँदे सहमति भयो। सरकारसँगको सहमतिपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा 'ध्वंसांत्मक गतिविधि' त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सक्रिय भइसकेको छ। तर, आफूहरुसँग भएको सहमतिअनुसार नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको विषय भने कार्यान्वयन नभएको नेताहरुको भनाइ छ।
सरकारसँग ३ बुँदे सहमति भएपछि पनि लामो समय जेलमै बसेका र सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार शुक्रबार मात्रै नख्खु कारागारबाट रिहा भएका सचिवालय सदस्य ओलीले आफूहरुसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा राज्यपक्षबाट 'बेइमानी' भएको बताएका छन्। नख्खु कारागारमा थुनामै रहेका बेला हृदयघात भएपछि केही दिन अस्पतालसमेत बसेका नेता ओलीले शुक्रबार नेपाल लाइभसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भएपनि उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग पनि छलफल अगाडि बढाइने बताए। सरकारसँगको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको अवस्था, पार्टीले अवलम्बन गर्ने नीति र कार्यक्रमका विषयमा नेता ओलीसँग नेपाल लाइभले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
झण्डै २ वर्षपछि जेलबाट छुट्नुभयो, जेलबाट छुट्दाको अनुभव कस्तो छ, सुखद् दु:खद्?
जेलबाट छुट्दा खुसी हुने कुरा भयो। यसरी लामो समय जेलबाट छुट्दा आनन्द भएको छ। अर्कोतिर हेर्दा साथीहरु छुट्नुभएको छैन। जेलमै बन्दी जीवन विताइरहनु भएको छ। त्यो चिन्ताको विषय भएको छ।
अब पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा जोडिन पाइने भयो। पार्टीको नीति र कार्यक्रमलाई बुझेर अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ।
सरकारसँग ३ बुँदे सहमति भएको ५ महिना भयो। सहमतिअनुसार नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्धा फिर्ता नभएको तपाईंहरुकै गुनासो छ। त्यस विषयमा तपाईंहरु कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ?
जसरी केपी ओलीले सबैलाई राखेर संसारसमक्ष सहमति गरे। त्यो पनि राष्ट्रिय सभा गृहमा सबैले देख्नेगरी सहमति भयो। त्यसमा हामीले सहमति इमान्दारितापूर्वक पालना गर्‍यौं। उहाँहरुले सहमति पालनामा बेइमानी गर्नुभयो। अहिले पनि राज्यको तर्फबाट मुद्धा खारेज गर्ने र साथीहरुलाई छोड्ने काम भएको छैन। धेरै साथीहरु जेलमै हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ राज्य सहमति पालना गर्न गम्भीरतापूर्वक लागेको छैन। अदालतका जसरी आफ्ना नियम कानुन हुन्छन्, त्यसरी मानेको जस्तो देखिन्छ। कताकता विरोधाभाष जस्तो देखिन्छ। राज्यसत्ताका अंगहरुका बीचमा समन्वय भइराखेको छैन भन्ने देखिन्छ। यसको अर्थ राज्यका अंगहरु कता–कता कुन विचारबाट चलिरहेका छन् भन्ने विरोधाभाष देखिन्छन्।
अहिले देउवाजीको नयाँ सरकार बनेको छ। देउवा सरकारसँग छलफल अघि बढाउने काम गर्ने छौं। सरकारसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिला गरियो भने सडक आन्दोलनमा जान्छौं।
तपाईंको पार्टीले केपी ओली नेतृत्वको एमालेसँग कार्यगत एकता गर्ने विषय पनि चर्चामा आएको थियो। ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि ५ दलिय मोर्चामा सामेल भएका कम्युनिस्टसँग मोर्चाबन्दी गर्ने कुरा आईराखेका छन्। खासमा तपाईंहरुको पार्टी कसरी अगाडि बढ्न खोजेको हो?
यस विषयमा अलि बढी अफवाह फैलाइएको छ। सत्तामा जुन पार्टी हुन्छ, वार्ता त्यसैसँग गर्ने कुरा हुन्छ। खासगरी माओवादी केन्द्रका साथीहरुले केपी ओली नेतृत्वको एमालेमा मिल्न लागे भन्ने हल्ला चलाउनुभयो। त्यो सही साबित भएन। अहिले उहाँहरु (पाँच दलीय मोर्चा)को सरकार भएपछि उहाँहरुसँगै संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। के यतिबेला उहाँहरुसँग मिल्न लागेको भन्ने हुन्छ त? त्यसो त हुँदैन। त्यस्तो तर्क गरेर हुँदैन। त्यो हावा कुरा भयो।
हामी अहिले कसैसँग मिलेका छैनौं। नेता-कार्यकर्ता रिहा र मुद्धा फिर्ताको विषयमा छलफलको दौरानमा छौं। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने शक्तिलाई भड्काउने काम गरिएको छ। हामी एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोमा अघि बढ्दै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने हो। अब हामी वैज्ञानिक समाजवादमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा जानुपर्छ। आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरुले समाजवादमा जाने सोच बनाउनु पर्ने हुन्छ। वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने विषयमा कसैले भ्रम पाल्नु हुँदैन।
त्यसोभए संसद बाहिर भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको रणनीतिक मोर्चा बनाउन अझै सक्रिय बनाएर लाग्नु हुन्छ?
हो। रणनीतिक मोर्चालाई सक्रिय बनाउँछौं। लामो समयसम्म अगाडि बढ्न विचार मिल्ने पार्टीहरुको मोर्चा हो। एउटै विचार, दर्शन र सोच भएका पार्टीको लामो मार्चा हो। त्यो नयाँ प्रयोग पनि गर्न खोजेका छौं। रणनीतिक मोर्चालाई निरन्तरता दिने कुरामा दुविधा छैन।
तपाईंहरुसहित पूर्वमाओवादीहरु एक ठाउँमा हुने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन त?
पूर्वमाओवादीमा मार्क्सवादको प्राण रहेको छ भने मिल्नुपर्छ। माओवादीहरु मिल्न सक्ने अवस्था भएसम्म मिल्नुपर्छ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादी सिद्धान्त वा बोलीमा मात्रै नभएर व्यवहारमा जानको लागि कार्यदिशामा सहमति जनाउनु पर्‍यो। पार्टीले अवलम्बन गर्ने कार्यदिशाले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ। त्यो भयो भने एकता हुन सक्छ।